कार्यालय समयमै सरकारी गाडी चढेर निजी अस्पताल धाउँछन् प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सुदूरपश्चिम प्रदेश ∕ कार्यालय समयमै सरकारी गाडी चढेर निजी अस्पताल धाउँछन् प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख
कार्यालय समयमै सरकारी गाडी चढेर निजी अस्पताल धाउँछन् प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख
पदमराज भट्ट मंगलबार, २०७८ भदौ ८ गते, १३:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं—सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा कार्यालय समयमा नै सरकारी गाडी चढेर आयुर्वेद चिकित्सक बिरामी जाँच्न निजी अस्पताल पुग्ने गरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. खगेन्द्रबहादुर बम कार्यालय समयमै क्याम्पस रोडस्थित ओम आशा अस्पतालमा जाने गरेको तथ्य हेल्थआवाजले फेला पारेको छ ।
मंगलबार दिउँसो १२ बजे सरकारी गाडी चढेर ओम आशा अस्पतालबाट करिब ५० मिटर दूरीमा गाडी पार्किङ गरी अस्पतालभित्र प्रवेश गरेका थिए । हेल्थ आवाजकर्मी अस्पतालभित्र प्रवेश गर्दा उनी एकजना महिला बिरामीको अल्ट्रासाउण्ड गरिरहेका थिए । केही समयमै डाक्टरको क्याबिनबाट बाहिरिने क्रममा ती बिरामीले आफूलाई पेट दुख्ने समस्या रहेकाले भिडियो एक्सरे गराएको बताइन् ।
उक्त ओम आशा अस्पतालमा डा. बस्ने क्याबिनको बाहिर डा. खगेन्द्र बहादुर बम सिनियर आयुर्वेद फिजिसियन (टीयु ) १५६ अल्ट्रासोनोलोजिष्ट लेखिएको बोर्ड नै राखिएको छ ।
यसअघि सोमबार पनि प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. बमले प्रयोग गर्दै आएको से १ झ २६१ नम्बरको सरकारी गाडी २ बजेको समयमा अस्पताल अगाडि भेटिएको थियो । भाद्र २ गते दिउँसो अस्पतालमा एक बिरामीले फोन गरेर अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपरेमा कुन चिकित्सकले गर्छन भनेर सोध्दा डा. खगेन्द्र गर्ने गरेको जानकारी त्यहाँकी कर्मचारीले दिएकी थिइन् । उनले अहिले डा. खगेन्द्रले नै अल्ट्रासाउड गरिरहेको र चेकअप गर्न आउँदा हुने जवाफ दिएकी थिइन् ।
यस विषयमा हेल्थआवाजले डा. खगेन्द्रलाई सम्पर्क गर्दा उनले भने आफू कार्यलय समयमा निजीमा बिरामी हेर्न नगएको प्रष्टीकरण दिए । ‘हिजो आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर उहाँलाई चेकअप गराउन गएको थिए । आज उहाँको थप फ्लोअप भएकाले गएको हुँ ।’ तर, क्लिनिकका कर्मचारीले भने डा. बमकी आमा सोमबारै उपचार गरेर फर्किएको जानकारी हेल्थआवाजलाई दिए ।
कोभिड—१९ संक्रमण बढेपछि सरकारले कार्यलय प्रमुखहरुलाई निजी अस्पतालमा प्रायक्टिस गर्न रोक लगाएको छ । सरकारसँग अनुमति लिएर प्रायक्टिस गरिरहेकाहरुको पनि एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको छ । तथापि, अधिकांश अस्पतालका अस्पताल प्रमुखहरु अहिले पनि निजीमा जान छोडेका छैनन् ।